U-Apple uza kuthengisa i-AirPods ezizigidi ezingama-30 kunyaka olandelayo | Ndisuka mac
Ukuboniswa kwee-AirPods kwi-Keynote ngo-Septemba wonyaka ophelileyo kwakumangalisa, enye yezo i-Apple yayisisebenzisa kwiminyaka eyadlulayo, ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iindaba zazivezile malunga nophuhliso olunokwenzeka lwee-headphone ezingenazingcingo zolu hlobo. U-Apple uthathe isigqibo sokuzityhila ngokusesikweni ngaphambi kokuba imifanekiso ivuza, into aqhelene nayo, ukusukela kwinkulumbuso yokugqibela, ukwabhengeze i-HomePod, isixhobo esingazukufikelela kwintengiso kude kube sekupheleni konyaka, ngethamsanqa, njenge-AirPower, itshaja engenazingcingo leyo ivumela ukutshaja zombini i-iPhone, iApple Watch kunye nebhokisi yeAirPods kunye.
Okwangoku ukufumaneka kwee-AirPod kuphakathi kwentsuku ezintathu ukuya kwezintathu, ukubakho okuthathe phantse iinyanga ezisibhozo kukuzinzaUkusukela ngexesha leenyanga zokuqala ezi-8, ukubakho akuzange kwehle ngaphantsi kweeveki ezi-6. Ngaphandle kokufumaneka, ngokuka-Arthur Liao, umhlalutyi kwiFubon Securities, u-Apple ukwazile ukuthengisa malunga ne-20 yezigidi zeeyunithi kulo nyaka, inani elizonyuka liye kwiiyunithi ezingama-30 ezigidi kunyaka ozayo, ngokutsho komhlalutyi ofanayo.
Ukubuyela kumxholo wePod yasekhaya, le isithethi esikrelekrele esiya kulungelelanisa isandi egumbini apho sikhonaIya kuqala ukukhutshwa e-United States, e-United Kingdom nase-Australia, ngaphambi kokuba yande nakwamanye amazwe. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba inkampani ye-Inventec yiyo ephethe ukuyenza, kunye nemveliso yenyanga yeeyunithi ezingama-50.000 XNUMX.
Injongo ka-Apple, ngokutsho komhlalutyi omnye, kukuba thengisa ngaphezulu kweeyunithi ezizigidi ezi-4 zePodPod kula mazwe mathathu kunyaka wokuqala wokuphehlelelwa, uqikelelo olubonakala lunethemba kakhulu kuthathelwa ingqalelo ukuba esi sixhobo singekaziswa ngokusemthethweni kwaye okwangoku i-Apple ibingafuni, okanye ingenako, ukucacisa yonke imisebenzi esisisithethi esisinika yona Apile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ithengise i-AirPods ezizigidi ezingama-30 kunyaka olandelayo